Fitantanana fidiram-bola mahatalanjona mba hifehezana ny orinasanao manofa trano
Ny tombom-barotra azon'ny mpitantana hofan-trano fialan-tsasatra sy ny mpandraharaha amin'ny serivisy dia miankina betsaka amin'ny famoahana ny denaria farany amin'ny daty farany hahazoana ireo famandrihana mamy ireo. Na izany aza, ny fametrahana ny taha sy ny fiantohana fa zaraina ara-potoana amin'ny tsenan'ny varotra rehetra izy ireo, anisan'izany ny tranokalan'ny famandrihana mivantana, dia mety ho sarotra indraindray.
Ankoatr'izay, rehefa mitombo ny isan'ny fananana eo ambany fitantanana, dia manomboka mihombo hatrany ny fotoana anaovana admin. Ny vidiny mampiantrano ny fananana dia miankina amin'ny toe-javatra tsena miovaova haingana ary afaka miovaova be miankina amin'ny lafin-javatra maro. Matetika ny mpitantana ny vola miditra dia mahita fa sarotra ny maka ny fampahalalana takian'izy ireo amin'ny rafitra fitantanana fananana. Ny tsy fisian'ny KPI mora idirana dia mametra ny fahombiazan'ny mpitantana vola.
Ahoana no hanampian'ny Zeevou ny fitaovana fitantanana ny vola miditra?
Ny Zeevou Sell dia mamela anao hametraka ny laharam-pahamehanao eo afovoany ary hizara azy ireo mihoatra 200 channel amin'ny fotoana tena izy, ary asaivo miseho irery izy ireo tranokala famandrihana mivantana. Ny sarany dia azo apetraka amin'ny ankapobeny ho an'ny karazana singa marobe amin'ny indray mandeha raha toa ka mampiasa ny paikadim-bidy mitovy amin'ny trano ianao. Ny famaritana dia azo faritana amin'ny andro amin'ny herinandro mandritra ny fotoana voafaritra, ary azo apetraka ihany koa ny fijanonana farafahakeliny sy ambony indrindra.
Ankoatr'izay, ny zotram-ponenan'i Zeevou dia ahafahanao mampiakatra ny vidin'ny fananana rehetra ao amin'ny tanàna voatondro ho daty fara tampony, mba hividianana fotoana anao hieritreretana bebe kokoa momba ny tahan'ny tianao hivarotana ny karazana singa tsirairay amin'ireo daty tampon'isa ireo. Ny isa rehetra napetraka dia azo jerena toy ny lisitra iray, na ao amin'ny Kalandrie isan'ny singa & Fahafahana misy. Zeevou dia mamela anao hivarotra add-on ho an'ny vokatra sy serivisy fanampiny, ary koa hamorona fisondrotana miaraka na tsy misy kaody voucher hampiasana amin'ny famandrihana mivantana.
Raha maniry ny hanao automatique ny fanaraha-maso ny tsena sy ny fananganana taham-pahalalana ianao amin'ny alàlan'ny fitaovana vidin-javatra maranitra mitovy amin'izany Airbnb na tolotra VRBO, azonao atao ny misoratra anarana amin'ny iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fidirana amin'ny vidiny mahery toa ny Ankoatra ny vidiny or PriceLabs. Io dia ahafahanao mandeha ho azy ny fametrahana ny salan'isa, ary alefa any Zeevou ireo. Izahay avy eo dia mizara ireo takelaka ireo amin'ny tranonkalanao manokana ho an'ny famandrihana mivantana, ary koa amin'ireo fantsona nampifangaroanao an'i Zeevou hampiasa ny fampidirana API 2-lalana.
Zeevou koa dia manolotra tatitra sasany ahafahan'ny mpitantana fidiram-bola miasa amin'ny fomba mahomby kokoa. Ankoatry ny tatitra momba ny varotra, ny mpampiantrano dia afaka mampiasa ny tatitra momba ny Occupancy Percentage ihany koa ho an'ny fanehoana loko misy loko, fanehoana an-tsary ny haavon'ny toeram-ponenana isan'andro, ary koa ny tondro sasany momba ny fahombiazan'ny volana. Ankoatr'izay, ny Tatitra Momba ny Volana isam-bolana dia ahafahan'ny mpampiantrano mamakafaka ny tombom-bidin'izy ireo sy ny vola azon'ny tompon-trano azony, ka manampy azy ireo handamina tsara ny vidiny amin'ny fotoana maharitra.